Ay ka caadayeesheen Safarka Xagaaga iyo Jilaalka darteed.
Ha u caabudeen Eebeha Beydkan (Kacbada).
Eebahi ka quudiyay gaajo, kana aamingaliyay cabsi.
Ka warrama kan beenin Abaalmarinta (Qiyaamada).
Kaas xooga Agoonta (xageeda).
Aan kuna boorrinaynin quudinta miskiinka.
Waxaa halaag u sugnaaday kuwa tukan (waa Munaafiqiinta).
Ee haddana halmaansan Salaaddooda.
Dadkana is tusiya.
Annagaa ku Sinnay Nabiyow Waadi Janno (iyo khary badan).
Ee tuko Eebaha dartiis, waxna u gawrac.
Ruuxii ku necebna waa mid cidhib beelay.